Daawo farriin ka timid: Gabar uu nin taksiile ah ku kufsaday Hargeysa oo guurkeedii raja beelay | Caasimada Online
Home Warar Daawo farriin ka timid: Gabar uu nin taksiile ah ku kufsaday Hargeysa...
Daawo farriin ka timid: Gabar uu nin taksiile ah ku kufsaday Hargeysa oo guurkeedii raja beelay
Hargeysa (Caasimada Online) – Fadumo waa gabar 16 sano jir ah, waxay taagan tahay dariishada xafiis NGO oo ku yaal Hargeysa, waxay ka fikireysaa markii la kufsaday labo bilood kadib markii ay kasoo laabaday arooska saaxiibteed.
“Waxaan isku dayay inaan ku ordo guri meesha ka dhawaa, laakiin wuu iga soo daba orday, wuuna iga itaal roonaaday ul ayuuna igu dhuftay, kadibna halkaasi ayuu igu kufsaday” ayey tiri Fadumo oo ilmada ay ka qubanayaan.
Hadda Fadumo waxay ka tirsan tahay dadka kaalmada ka hela xarunta daryeelka dumarka la faquuqo ama kufsi jinsi lagula kaco, halkaasoo ay taageero ka hesho Baahi Koop Group.
Soomaaliya, ayaa waxay kaalimaha hore kaga jirtaa dalalka xadgudubyada jinsi iyo dhibaateynta dumarka. Warbixin dhawaan ay soo diyaariyeen ururada u dooda xquuqda dumarka ee ka dhisan Hargeysa ayaa qeexday n bishiiba la qabto 25 dumar ah oo kusfi loo geysto.
Xarunta Baahi-Koob Hargeysa waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo loogu talagalay dadka ka badbaada rabshadaha jinsiga ku dhisan (GBV) sida kufsiga. waxayna bishiiba qaabishaa 25 dumar ah oo qaarkood la dhaafsiiyay gabarnimoadoda ama bigranimadooda. Sidoo kale, dumarka la kufsada ayaa waxaa la siiyaa dawooyin ay ku jiraan kuwa cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS.
W/soo aruuriyay: Ali Muhiyaddiin Ali